1 VaKorinde 14 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
14 Teverai rudo, asi rambai muchishingaira kutsvaka zvipo zvomudzimu,+ asi chinonyanya kudiwa ndechokuti muprofite.+ 2 Nokuti anotaura nendimi haatauri nevanhu, asi naMwari, nokuti hapana anoteerera,+ asi iye anotaura zvakavanzika zvitsvene+ achishandisa mudzimu. 3 Zvisinei, uya anoprofita anovaka+ nokukurudzira nokunyaradza vanhu nokutaura kwake. 4 Uya anotaura nendimi anozvivaka, asi uya anoprofita anovaka ungano. 5 Zvino ndinoda kuti mose mutaure nendimi,+ asi ndinganyanya kuda kuti muprofite.+ Chokwadi, kana uya anotaura nendimi+ akasaturikira kuti ungano ivakwe, saka uya anoprofita mukuru kwaari. 6 Asi panguva ino, hama, kana ndikauya ndichitaura nemi nendimi, ndezvipi zvakanaka zvandingakuitirai kana ndikasataura nemi ndichishandisa zvakazarurwa+ kana zvimwe zivo+ kana kuprofita kana chinhu chinodzidziswa? 7 Sezvazviri, zvinhu zvisina upenyu zvinorira,+ ingava nyere kana rudimbwa; kana chinhu chacho chikasasiyanisa maririro, zvingazivikanwa sei kuti chii chiri kuridzwa panyere kana parudimbwa? 8 Nokuti chokwadi, kana bhosvo rikarira zvisina kujeka, ndiani achagadzirira kunorwa?+ 9 Saizvozvowo, kana mukasataura norurimi zvinonzwisiswa zviri nyore,+ zvichazivikanwa sei kuti chii chiri kutaurwa? Chokwadi, munenge muchitaurira mumhepo.+ 10 Zvingava kuti kune marudzi mazhinji kwazvo ematauriro munyika, asi hapana rudzi rusina zvarunoreva. 11 Zvino, kana ndisinganzwisisi zvinoreva kutaura kwacho, ndichava wokune imwe nyika+ kune ari kutaura, uye ari kutaura achava wokune imwe nyika kwandiri. 12 Saizvozvowo imi, zvamunoda kwazvo zvipo zvomudzimu,+ tsvakai kuwedzera mazviri kuti ungano ivakwe.+ 13 Naizvozvo munhu anotaura nendimi ngaanyengetere kuti iye aturikire.+ 14 Nokuti kana ndichinyengetera nendimi, chipo changu chomudzimu ndicho chinenge chichinyengetera,+ asi pfungwa dzangu hadzina zvibereko. 15 Saka, chii chinofanira kuitwa? Ndichanyengetera nechipo chomudzimu, asi ndichanyengeterawo nepfungwa dzangu. Ndichaimba rwiyo rwokurumbidza+ nechipo chomudzimu, asi ndichaimbawo rwiyo rwokurumbidza nepfungwa dzangu.+ 16 Kana zvisina kudaro, kana ukarumbidza nechipo chomudzimu, ko munhu akagara pachigaro chomunhuwo zvake achati “Ameni”+ sei paunoonga, iye zvaasingazivi zvauri kutaura? 17 Chokwadi, iwe unoonga nenzira yakanaka kwazvo, asi mumwe munhu haasi kuvakwa.+ 18 Ndinoonga Mwari kuti, ndinotaura nendimi zhinji kupfuura zvamunoita imi mose.+ 19 Kunyange zvakadaro, ndingasva hangu ndataura mashoko mashanu nepfungwa dzangu muungano, kuti ndirayiridzewo vamwe ndichiita zvokuvataurira nomuromo, panzvimbo pemashoko ane zviuru gumi nendimi.+ 20 Hama, musava vana vaduku pasimba rokunzwisisa,+ asi ivai vacheche pane zvakaipa;+ kurai zvakakwana pasimba rokunzwisisa.+ 21 MuMutemo makanyorwa kuti: “‘Ndichataura nevanhu+ ava nendimi dzevanhu vokune dzimwe nyika nemiromo yevanhu vavasingazivi,+ asi kunyange panguva iyoyo havazonditeereri,’ anodaro Jehovha.”+ 22 Naizvozvo ndimi hadzisi dzechiratidzo+ kuvatendi, asi kune vasingatendi,+ asi kuprofita, hakusi kwevasingatendi, asi kwevanotenda.+ 23 Naizvozvo, kana ungano yose ikaungana panzvimbo imwe chete uye vose vakataura nendimi,+ asi vanhuwo zvavo kana kuti vasingatendi vakapinda, havangati munopenga here? 24 Asi kana mose muchiprofita uye munhu asingatendi chero upi zvake kana kuti munhuwo zvake akapinda, anotsiurwa navo vose,+ anonyatsoongororwa navose; 25 zvakavanzika zvomwoyo wake zvinoiswa pachena,+ zvokuti achawira pasi nechiso chake onamata Mwari, achizivisa kuti: “Chokwadi Mwari ari pakati penyu.”+ 26 Saka hama, chii chinofanira kuitwa? Pamunoungana, mumwe ane pisarema, mumwe ane chinhu chokudzidzisa, mumwe ane zvakazarurwa, mumwe ane chipo chendimi, mumwe ane chokududzira.+ Zvinhu zvose ngazviitike nokuda kwokuvaka.+ 27 Kana mumwe akataura nendimi, ngazvive zvevaviri kana vatatu chete, vachichinjana; uye mumwe ngaaturikire.+ 28 Asi kana pasina muturikiri, ngaarambe akanyarara muungano, ataure oga+ uye ataure naMwari. 29 Uyezve, vaprofita+ vaviri kana vatatu ngavataure, uye vamwe ngavanzwisise zvazvinoreva.+ 30 Asi kana zvikazarurirwa mumwe+ akagara ipapo, wokutanga ngaarambe akanyarara. 31 Nokuti mose munogona kuprofita+ muchitevedzana, kuti vose vadzidze uye vose vakurudzirwe.+ 32 Zvipo zvomudzimu zvevaprofita zvinofanira kudzorwa nevaprofita. 33 Nokuti Mwari haasi Mwari wenyonganyonga,+ asi worugare.+ Sezvazvakaita muungano dzose dzevatsvene, 34 vakadzi ngavarambe vakanyarara+ muungano, nokuti hazvibvumirwi kuti vataure, asi ngavazviise pasi,+ sezvinotaura Mutemo.+ 35 Zvino, kana vachida kudzidza chimwe chinhu, ngavabvunze varume vavo kumba, nokuti zvinonyadzisa+ kuti mukadzi ataure muungano. 36 Chii? Shoko raMwari rakabva kwamuri here,+ kana kuti rakasvika kwamuri chete here? 37 Kana paine munhu anofunga kuti muprofita kana kuti ane chipo chomudzimu, ngaabvume zvinhu zvandiri kukunyorerai, nokuti izvo murayiro waShe.+ 38 Asi kana munhu asingazivi, anoramba asingazivi. 39 Naizvozvo, hama dzangu, rambai muchishingaira kutsvaka kuprofita,+ asi musarambidza kutaura nendimi.+ 40 Asi zvinhu zvose ngazviitike nenzira yakakodzera uye zvakarongeka.+